Ebook n'efu: Are na-egwu egwuregwu nọmba? | Martech Zone
Anyị edeela akwụkwọ maka etu o si masị anyị Onye ọ bụla iji gbaa ndi oru gi ume ka ha kwalite onodu ahia gi. Mgbe ha mechara post ahụ, ndị otu ahụ bịara wee gbaa m ajụjụ ọnụ gbasara ahụmịhe m na soshal midia. Ha were nsonaazụ ajụjụ ọnụ ahụ wee mepụta a mara mma ebook ị nwere ike ibudata na saịtị ha.
Ọ bụghị mara mma n'ihi na m Foto muglọ Nga bụ na mkpuchi:)… ha dị nnọọ ka a oké ọrụ na akada olu m na formatting mkparịta ụka n'ime a nwere oke ndepụta nke ajụjụ na m nzaghachi. M na-aza ajụjụ ndị a:
Kedu ihe ndị ahịa gị na-achọ?
Kedu ka ị ga-esi mata ọwa nke ị ga-elekwasị anya?
Agbanwe ederede blọọgụ na kedu ka ọ si dabaa na atụmatụ niile?
Kedu ka esi kọwaa àgwà na ndị na-ajụ ase?
Kedu ihe ọ dị ka itolite obodo gị?
Kedu ọnọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi ugbu a?
Kedu ka ị ga - esi nweta onye ị na - achọ ịchọta ga - elekwasị anya na ntụgharị na okporo ụzọ na mmasị?
Kedu ihe bụ uche gị n'afọ ọzọ? Olee nnukwu mgbanwe ị na-ahụ n’ụwa?
Ebook a bụ ezigbo nlele n'ime ihe m ga-ekwu maka ya na Social Media Marketing World na ngwụsị ọnwa Mach. Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ saịtị, ndị ọkachamara na ọbụna nyiwe na-elekwasị anya n'inweta ma a bịa na mgbasa ozi mmekọrịta. Ohere mgbasa ozi kachasị dị na mgbasa ozi abụghị nnweta, ọ bụ njigide. Ndị ụlọ ọrụ nwere ohere ige ntị ma wulite mmekọrịta n'etiti ndị ahịa ha ugbu a.
Ebook a bụ agụ ọkụ… ọ naghị abanye n'ụdị ọrụ aka ọrụ ọ bụla ma ọ bụ tụọ aka na ngwọta ọ bụla ma ọ bụ njikọta ga-enyere gị aka. Ọ bụ naanị ezigbo ndu iji nweta echiche m - mepụtara site na ọtụtụ afọ anyị na ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ - ebipụta. N'ihi Onye ọ bụla maka ohere iji wepụta nke a! Ha na eweputa usoro ntaneti ndia site n'aka ndi ndu ole na ole n'ime ulo oru a - site na ndi ozo dika Sandy Carter, Amy Tennison, Jason Falls, Chris Brogan, Joe Pulizzi, Mari Smith… na ndi ozo.
Budata Ebook Ugbu a!
Tags: Nnenna OnwukaChris brogandouglas karrebookonye ọ bụla na-elekọta mmadụjason daraJoe PulizziMari SmithAja Sandter